कांग्रेस जिल्ला सभापतिमा उम्मेदवारी दिनमात्रै ५० हजार रुपैयाँ शुल्क ! – RaptiSandesh
Home / Feature Breaking news / कांग्रेस जिल्ला सभापतिमा उम्मेदवारी दिनमात्रै ५० हजार रुपैयाँ शुल्क !
कांग्रेस जिल्ला सभापतिमा उम्मेदवारी दिनमात्रै ५० हजार रुपैयाँ शुल्क !
काठमाडौ,४ मंसिर । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सभापतिको उम्मेदवार बन्न कति शुल्क लाग्ला ?
भखभचथनजबचकबलष्mब दयह बम द्द
Previous: निर्वाध अभिव्यक्तिमा बन्देज नलागोस्
Next: लमहीमा बस दुर्घटना,२९ जना घाइते